ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ lotus leaf painting ပန်းချီကားလေးကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ ယုသန္တာတင် - Cele Gabar
ပရိသတ်ကြီးရေ ယုသန္တာတင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားခဲ့တဲ့ ယုကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကို အနည်းငယ်သာလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်။
ယုကတော့ လက်ရှိမှာ သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်လေးတွေကို လုပ်ကိုင်ပြီး ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းသာဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာ ပန်းချီဆွဲတဲ့ သင်တန်းလေးကို တက်ရောက်နေခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားလေးတစ်ချပ်ကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။
“ကိုယ့်ရဲ့ TGIS လေး. စိတ်မရှည်တဲ့ကိုယ်လေး lotus leaf painting လုပ်တဲ့အတန်းလေး ပြီးအောင်တက်နိုင်ခဲ့ပြီ” ဆိုပြီးတော့ သင်တန်းလေးကို အောင်မြင်ပြီးဆုံးအောင်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ပီတိဖြစ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ တကယ်ကို သင်တန်းတက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ပန်းချီကားလို့ မထင်ရအောင်ကို လှလိုက်တာနော်။
Source – YU Thandar Tin
ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားတဲ့ lotus leaf painting ပန္းခ်ီကားေလးကို ထုတ္ႂကြားလာတဲ့ ယုသႏၲာတင္
ပရိသတ္ႀကီးေရ ယုသႏၲာတင္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ေမာ္ဒယ္လ္သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိပ္တန္းမင္းသမီးတစ္လက္အေနနဲ႔ကိုေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိထားခဲ့တဲ့ ယုကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့အႏုပညာအလုပ္ေတြကို အနည္းငယ္သာလုပ္ကိုင္ေနခဲ့ပါတယ္။
ယုကေတာ့ လက္ရွိမွာ သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ္ေလးေတြကို လုပ္ကိုင္ၿပီး ဘဝကိုေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းသာျဖတ္သန္းေနခဲ့ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာ ပန္းခ်ီဆြဲတဲ့ သင္တန္းေလးကို တက္ေရာက္ေနခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေလးတစ္ခ်ပ္ကို သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ မွ်ေဝလာခဲ့ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ။
“ကိုယ့္ရဲ႕ TGIS ေလး. စိတ္မရွည္တဲ့ကိုယ္ေလး lotus leaf painting လုပ္တဲ့အတန္းေလး ျပီးေအာင္တက္ႏိုင္ခဲ့ျပီ” ဆိုျပီးေတာ့ သင္တန္းေလးကို ေအာင္ျမင္ျပီးဆံုးေအာင္တက္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ပီတိျဖစ္ေနခဲ့ပါေသးတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေရ တကယ္ကို သင္တန္းတက္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပန္းခ်ီကားလို႕ မထင္ရေအာင္ကို လွလိုက္တာေနာ္။
Previous post ” နေချင်စရာကောင်းပြီး စိတ်ကြည်လင်မှုရရှိစေတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမအခန်းလေးကို ပြသလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်”
Next post IU ရဲ့ အကြည့်တွေမလွှဲနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသားဆယ်လီ